बि.स.२०७६ भदौ २९ देखि असोज ४ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल, जयमनकामना!::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
बि.स.२०७६ भदौ २९ देखि असोज ४ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल, जयमनकामना!
बोलीको मधुरताका कारण विपरीतलिंगीहरू आफूतिर आकर्षित भएको अवस्था छ । होस नपुर्‍याई निर्णय गर्दा स–साना कुरामा पनि आलोचित हुनुपर्नेछ, जसले मर्यादामा चोट पुग्न सक्छ । नयाँ काम प्राप्त भए पनि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। साइनो गाँस्नेहरूलाई समय दिँदैमा समय बित्न सक्छ। आलोचकहरूले आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउलान्। तापनि सप्ताहान्तमा धनलाभ हुने सम्भावना छ। स्राेत–साधन जुट्नाले दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। मंगलवारदेखि आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ। केही उल्झन र अस्वस्थताले समस्या पर्ला
साथीभाइको सुझाव अनुसरण गर्दा थप उचाइमा पुगिनेछ । सामाजिक सक्रियताले परिवारकै प्रतिष्ठा बढाउनेछ । समकक्षी युवा–युवतीमाझ गुणस्तरीय परिचय दिने अवसर प्राप्त हुनेछ । मनोरञ्जन तथा भोजभतेरमा सहभागी हँुदा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । उधारोमा व्यापार गर्नुपर्ला। तापनि आंशिक फाइदा हुनेछ। होस नपुर्याउँदा धन बाहिरिने सम्भावना छ। मंगलवारदेखि आकस्मिक खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव खट्किन सक्छ। सहयोगीहरूको भर पर्दा काम दोहोर्याउनुपर्ला। विदेश ताक्नेहरूलाई भने यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। बिहीवारपछि साथीभाइको सहयोग जुट्नेछ र मिहिनेतले सफलताको उचाइमा पुर्याउनेछ।
साता मध्यम तवरले बित्नेछ । जटिल कार्यमार्फत प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । मझौला किसिमका लगानीबाट धन आर्जन गरिनेछ । नयाँ स्थानको भ्रमण गर्नाले खर्च वृद्धि हुने परिस्थितिमा आवश्यक खर्चको जोहो गर्नुपर्नेछ । मन पराउने साथीले दोहोरो कुरा गरी नैराश्यता उत्पन्न गराउन सक्छन् । दिगो काम प्रारम्भ हुनुका साथै व्यवसायमा प्रगति हुनेछ। आम्दानीका स्रोतहरू बढ्नेछन् भने सञ्चित कर्मफल प्राप्त हुनेछ। बिहीवारपछि कामविशेषका लागि धेरै रकम जुटाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। विदेश जान चाहनेहरुका लागि यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ।
आर्थिक क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाई सोचेजस्तै लाभ लिन सकिनेछ । सिर्जनात्मक कार्यले जीवनसंगीसितको वैचारिक मतभिन्नता समाप्त गर्नेछ ।। घरायसी व्यवहारमा संलग्न नहुनु नै उपयुक्त हुन्छ । इतिहास एवं धर्म–संस्कृतिको जगेर्नामा रुचि जाग्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग भेटघाट गर्ने अवसर जुट्नेछ। लगनशीलताले दाम, इनाम एवं प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। तारिफयोग्य काम गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ र आम्दानी बढ्नेछ। भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ, कर्म गर्न तत्पर रहनुहोला।
हेलचेक्र्याइँ गर्दा भविष्यका अवसरहरू स्वत: समाप्त हुनेछन् । करियर बनाउन विदेशी मित्रको सुझाव अनुसरण गर्दा थप सहज हुनेछ । रातो रंग प्रयोगमा ल्याउन सके सफलताको नजिक पुग्न सहज होला । सुरुमा अस्वस्थताले कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। अध्ययनमा बाधा पुग्नेछ भने वादविवादले समस्या निम्त्याउन सक्छ। तापनि बुद्धिको उपयोगले समस्या सुल्झाउन सफल भइनेछ। चुनौती देखिए पनि समस्याको जड पत्ता लाग्नेछ। साताको अन्त्यमा खानपानको फेरबदलले स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता निम्त्याउन सक्छ ।
भविष्यका निम्ति जग बसाउने कार्यको शुभारम्भ हुनेछ । छोटो समयमा परिचित नयाँ मित्रहरूसँग भ्रमण गर्दा सचेत रहनुपर्नेछ । अधुरै रहेको लामो समयदेखिको मनोरञ्जन तथा विलासी चाहना पूर्ण हुनेछ । मान्यजनको सुझाव आत्मसात् गर्दा चुनौतीहरूबाट पार पाइनेछ । प्रियभेटले साताको प्रारम्भ रमाइलो रहनेछ। अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। आफ्ना कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउने प्रयत्न गर्नेछन्। बिहीवारपछि स्थिति अनुकूल बन्नेछ। समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्।
नसोचेको अवसर आइलाग्ने सम्भावना छ । नयाँ अवसरले थप मेहनतको अपेक्षा गरेको छ । उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त हुँदा प्रेमी–प्रेमिका दंग पर्नेछन् । अभिभावकको सुझाव अनुसरण गर्दा शिखर छुन सकिनेछ । ईर्ष्या गर्नेहरूले अवरोध पुर्याउने हुँदा काममा होसियार रहनुपर्ला। आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। तापनि बुद्धिले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। सप्ताहान्तमा अपांग तथा वृद्धवृद्धाहरूलाई सहयोग गरी पूण्य आर्जनमा समय खर्चनुपर्नेछ ।
प्रारम्भमा बौद्धिक काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। अध्ययनमा राम्रो प्रगति हुनेछ भने रोकिएका काम बन्नाले नयाँ योजनातर्फ अग्रसर भइनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले दिगो काम सुरु गर्न सकिनेछ। पुरुषार्थी काम गर्दै अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। रचनात्मक कामले आम्दानीको दिगो स्रोत जुटाउन सक्छ । साथी–संगीहरूसँग नगदको कारोबार गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेछ । मनोरञ्जनका क्रममा समयको ख्याल गर्नुहोला । सोतो रंगको प्रयोगले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । साताको अन्त्यमा मित्रता एवं प्रेमको गाँठो कसिलो हुनसक्छ ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग सम्झैता गर्नुपरे पनि लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्‍याउनेछ । ईष्या गर्नेहरूलाई पुरुषार्थ गरेर देखाउन सकिनेछ । दिगो फाइदा हुने कार्य वा नोकरी प्राप्त हुनेछ । मन मिल्ने साथी फेला पर्नुका साथै प्रेमको बन्धन कसिलो हुनेछ । घरेलु काममा अलमलिनुपरे पनि घरमै आयस्रोत फेला पर्न सक्छ। समस्या दर्साउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। टाढिएका आफन्त नजिकिनेछन् र बुद्धिले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। साताको अन्त्यमा पूर्वतर्फको यात्रामा आकस्मिक लाभ होला ।
रोजगारी हुनेहरूलाई स्थान परिर्वतनको संयोग पर्न सक्छ । खर्च भए पनि फाइदाजनक काममा लगानी गर्ने अवसर जुट्नेछ । प्रारम्भमा केही चुनौती देखिए पनि मिहिनेतले हिम्मत दिलाउनेछ। पुरुषार्थ देखाएर दाम समाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काम शुभारम्भ हुन सक्छ। बुधबारपछिका दिनमा प्रतिष्ठित मित्रहरूसँग भलाकुसारी गरिनेछ । भूमि तथा सवारी साधन जोरिने सम्भावना टरेको छैन ।
पारिवारिक सुझाव मुताबिक व्यवसाय सञ्चालन गर्दा उचाइ प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने छैन । आकर्षक पहिरनमा ठाँटिएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । प्रतिभा प्रदर्शन गरेर धेरैलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ । काममा सुरुको प्रयत्नले साताभरि फाइदा दिलाउनेछ। बुद्धिले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता हुन सक्छ। सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। यात्रा गर्दा स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला ।
साताको प्रारम्भमा केही दौडधूप गर्नुपरे पनि आफ्ना लागि विशेष अवसर जुटाउन सकिनेछ । खर्चको मात्रा बढे पनि धेरै आवश्कता पूरा हुनेछन् । विदेश भ्रमणको प्रयत्न सफल हुन सक्छ । नजिकका साथीभाइ टाढिए पनि नयाँ साथी फेला पर्नेछ । प्रतिस्पर्धाले प्रगतितर्फ उन्मुख गराउनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम, दाम र इनाम कमाउने बेला छ। रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। भौतिक साधनकाे कमीले समस्या पर्न सक्छ। लगनशीलताले गुमेको प्रतिष्ठा दिलाउनेछ।